Valim-panontaniana haingana amin'ny fanontanian'ny SEO anao matetika
Mba hahitana ny tranokalanao hita amin'ny SERP, tokony hahalala bebe kokoa ianao fa tsy ny famaritana fitenim-pikarohana fimailo fikarohana sy ny fomba mety hikorontana ny toeranao. Mba hananganana fanentanana fanatontosana na fanaraha-maso ny asan'ny seo manam-pahaizana SEO, dia mila mahazo fahalalana lalindalina kokoa momba ny fitsipika sy teknika fanatsarana tranonkala ianao. Andeha hojerentsika ny momba ireo zavatra tena ilaina momba ny SEO maro ireo mpanjifany manana fanontaniana mikasika ny fivoaran'ny tranonkala saingy tsy azony hoe iza no hangataka fanazavana.
Omeo fanontaniana manontany tena momba ny SEO
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fikarohana biolojika sy karama?
Ny valin'ny fikarohana Pais na fikarakarana tsy fandriampahalemana dia ireo izay miseho ao amin'ny pejin'ny TOP SERP ary manana ny marika "Ads". "Amin'ny tranga sasany, mety hipoitra amin'ny pejy SERP ihany koa ireo valiny ireo - anthelios xl ac. Ireo dia domains izay handoa vola amin'ny mpizahatena amin'ny TOP-karazan'ny karazana fitadiavana amin'ny fangatahan'ireo mpampiasa. Mba hahatongavana any amin'ny fikarohana karama dia tsy mila manao fanentanana mendrika ianao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny handoa ny sangan'asan'ny mpampiasa tsirairay avy amin'ny dokam-barotrao. Ity karazana dokam-barotra isam-bolana ity dia antsoina hoe dokam-barotra isam-bolana ary ampiasaina hanintonana mpitsidika vaovao avy amin'ny fikarohana sy fanatsarana ny isa.
Ny fikarohana ara-karena na tsy karamaina dia manondro ny vokatra organika izay miseho amin'ny milina fikarohana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny tranonkala. Ny loharanon'ny tranonkala iray napetraka ao amin'ny TOP ny fikaroka organika dia mety hiankina amin'ny maha-zava-dehibe azy, ny kalitao ary ny SEO-friendliness. Ny tranonkala TOP laharana dia tokony hivoatra araka ny fenitry ny fikarohana rehetra. Amin'ny fitadiavana ny fikaroka organika, manandratra ny fahafahanao manatsara ny fanentanana ny marika ianao ary manintona ny fifamoivoizana momba ny kalitao izay hivadika ho fivarotana.
Firy no tokony haloako amin'ny serivisy SEO?
Ny saram-pikarohana fanatontosana fikarohana dia afaka miovaova arakaraky ny karazan-tsakafo misy anao, ny tsenan'ny tsenanao sy ny haben'ny fanatsarana (local, country, global). Ankoatra izany, ny vidiny dia miankina amin'ny fanamafisana orina ny serivisy sy ny laza. Raha fantatra mazava tsara ao amin'ny sampan-draharaham-barotra nomerika dizitaly izao tontolo izao, dia mety ho ny vidiny amin'ny serivisy dia ho ambony noho ny vidin'ny vidin-tsolika. Na izany aza, ny fampiasam-bola rehetra ataonao dia aloa amin'ny alàlan'ny paompy. Izany no antony tokony tsy hisalasalanao momba ny vidin'ny fampielezan-kevitra fanatsarana.
Aza latsaka amin'ny orinasa manome SEO amin'ny vidiny sarobidy be. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia misy fomba fiasa tsy miankina sy hosoka ao ambadik'izany. Amin'ny ankapobeny, ireo orinasa ireo dia mampiasa teknolojia mainty SEO hahazoana vokatra haingana. Na izany aza dia mety hitarika ho amin'ny sazy Google sy ny fihenan'ny loka.
Raha vao manomboka SEO aho, ohatrinona no tokony hiandry hanamarinana ny vokatra tsara voalohany?
SEO dia dingana mandany fotoana izay mila fotoana sy ezaka. Tsy azo ampiasaina mandritra ny alina izany. Ilaina amin'ny 6 ka hatramin'ny 9 herinandro ny fampiharana ireo tetik'ady SEO rehetra ary volana maromaro taorian'ny fanovana rehetra natao ho an'ny fanavaozana ara-barotra. Ireo mpikaroka mpikaroka dia mila fotoana vitsivitsy mba hikarakarana sy hanasongadinana ireo fiovana ao amin'ny tranonkalanao mba hahazoana ny tranokalanao any amin'ny toerana avo kokoa ao amin'ny SERP. Miankina amin'ny tsenan'ny varotrao, habaka ny habaka sy ny kalitaon'ny fanatsarana, dia mila 6 ka hatramin'ny 9 volana ny manomboka mahita ny vokatra SEO voalohany tsara.